Vaovao - NAHOANA NO TOKONY HANAO GALVANISA Aorian'ILAY FITIAVANA FENCING WIRE?
NAHOANA NO TOKONY HAMPIASAINA NY GALVANIZA AOKA NY MATENIANA FENCING WIRE?
Ianao ve mitady fefy tariby mifono vy?
Fantatrao ve fa manana safidy ianao?
Misy karazany roa ny fitaovana fencing vita amin'ny tariby nohavaozina: GBW (nandrisika alohan'ny fanenomana / fanamafisam-peo) sy GAW (nandrisika taorian'ny fanenomana / fanamafisam-peo). Toa mitovy be ny fahitana azy ireo. Fa raha jerena akaiky dia hitanao ny mahasamihafa azy. Ary aorian'ny nametrahana azy ireo dia nanjary nahagaga kokoa ny fahasamihafana tamin'ny fandehan'ny fotoana. Iza amin'ireo no sarobidy kokoa, maharitra kokoa, mora azo?
GBW nandrisika alohan'ny welding GAW nandrisika alohan'ny welding
May ny point-zinc
vita avy amin'ny tadin'ny tariby vita amin'ny vy
May - tsy voaaro amin'ny harafesina sy ny harafesina
Rano sy ireo entona manimba rehetra eo amin'ny sampanan-dalana- Mihinana tsikelikely ny vy Ny vokatra vita rehetra dia nalaina tamin'ny alàlan'ny bata zinc
Ny fihaonan'ny tariby dia voaisy tombo-kase amin'ny zinc
Voaaro amin'ny fampiroboroboana ny loharanon'ny harafo sy harafesina
Hita amin'ny refy isan-karazany sy ny haben'ny harato
Chicken Wire Mesh / Hexagonal Wire Mesh
GBW nandrisika alohan'ny fanenomana GAW nandrisika alohan'ny fanenomana
Harato ara-toekarena sy lafo vidy raha oharina amin'ny GAW
antonony mandritra ny androm-piainana
misy amina karazana fitambarana fandrefesana sy fandrefesana Ny vokatra vita rehetra dia nalaina tamin'ny alàlan'ny bata zinc
Rano sira sy dabilio entona no ampiasaina
Ambony lavitra noho ny GBW iray
Fanantenan'ny androm-piainana lava kokoa
Mihoatra lavitra ny GBW ny fitaovana fanaovana fefy GAW. Ary haharitra taona maro kokoa noho ny GBW izy ireo. Izany no antony nahatonga azy ireo ho safidy mety indrindra hodinihina rehefa mila fefy tariby nohosorana vy ianao. Ny sandan'ny fampiasam-bolanao voalohany dia avo kokoa. Fa izany dia mihoatra ny offset amin'ny androm-piainan'ny tariby. Tsy vitan'ny hoe hampiasaina mandritra ny taona maro amin'ny fefy ianao. Fa ianao koa dia hitsitsy vola amin'ny fandaniana amin'ny fanamboarana sy fanoloana. Fa maninona no mandalo ireo fahasosorana sy fahasahiranana ireo?
Ny meshes GAW no safidy tsara indrindra ho an'ny tranom-biby koa. Ny galvanizing mavesatra dia hijoro hatrany amin'ny harafesin'ny taim-biby sy ny urine. Ny filàna fanoloana tranom-borona dia hihena be. Ny sandan'ny vokatra avo lenta voalohany dia hamonjy vola anao amin'ny farany.
Amin'ny ankapobeny dia sarotra kokoa ny mahita ny vokatra GAW. Vitsy ny ozinina mivarotra azy ireo, ampahany noho ny fandaniany vola be. Saingy tsy dia mafy ny fangatahana an'ity fitaovana fencing wire / wire manara-penitra avo lenta ity. Izany dia satria ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala momba ny Galvanized After Weld / Weave ary misy fahasamihafana lehibe.
Rehefa miteny ny olona fa mandeha vy ny tariby dia matetika izy ireo no mieritreritra ireo vokatra GBW mahazatra. Tsy tonga ao an-tsainao velively ny GAW, na dia mety aleon'izy ireo mividy vokatra avo lenta aza. Ny fiheverana dia natao fa satria mandranitra ny tariby dia haharitra mandritra ny taona maro. Na izany aza, raha fantatr'izy ireo dia afaka nividy zavatra tsara lavitra izay mety hahafa-po elaela kokoa izy ireo.